Rongedzazve, Nyorazve uye Regedza Zvemukati | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 21, 2014 Douglas Karr
Panogara paine hofori yakakura yezvinhu zvitsva zvekuti vazhinji vedu tiri kungonetseka kuenderana nekunyora zvinomanikidza zvemukati zvinopa kukosha kune vateereri vedu. Izvi infographic kubva kuna Marketo pane kuchengetedza zvirimo zvikuru izano rakasimba.
Rongedza zvakare - Ini ndinogona kushandisa repurpose sezwi reizvi, asi isu tinowanzo shandisa tsvagiridzo, nyaya uye magiraidhi pane akasiyana masvikiro patinenge tichigadzira zvemukati. Tinogona kutsvagisa webinar, asi zvakare nyora inoperekedza whitepaper uye mumiriri infographic uye blog post kuti uvasimudzire. Haasi munhu wese anochera zvemukati nenzira imwechete, saka kutaurira nyaya yako uye kuigadzirisa pamasvikiro kunonyanya kushanda.
Nyora zvekare - isu tine zvimwe zvinyorwa pane matekinoroji akachinja chaizvo. Panzvimbo pekunyora chinyorwa chitsva pane shanduko yechigadzirwa, isu tave kusimudzira izvo zvekutanga zvinyorwa uye nekuzvigadzirisa. Iko kune HUGE mukana wekuita izvi - nekuchengetedza kutendeseka kweiyo URL, magariro ekugovana munharaunda anogona kuwedzerwa uye kutsvaga enjini rankings haigone kungochengetwa chete, asi kunyangwe yakagadziriswa kana posvo yakagadziridzwa mushe!
Retire - iyi yanga yakaoma, asi tazviita. Isu taive nyore kupfuura zviuru zvishanu zvepaiti pane ino saiti asi paive nyore nyore pamusoro pezviuru zvemaposti zvaive zvisina basa kana zvachose zvainge zvisiri zvechinyakare. Zvimwe zvaive zviitiko zvekare, zvimwe zvechinyakare matekinoroji, uyezve zvimwe zvaive zvigadzirwa zvainge zvisisipo. Izvo zvekuti iwe wakatora nguva yekunyora chinhu kuti ubvise gare gare zvinounza misodzi zvishoma muziso rangu ... asi ini zvirinani kuti zvangu zvemukati zvinyatso tarisa pamisoro ichiri kushanda.
Aya marongero anga ari chikamu chehurongwa hwekuchengetedza hwese hwatakatangisa izvo zvakakonzera kwedu organic traffic katatu gore pamusoro pegore. Iwe unogona kufunga nezve maitirwo aungaita chirongwa chekuchengetedza chesaiti yako inova nechokwadi chekuti zvese zvemukati zvinokodzera uye nenguva!
Tags: kugutsikana kwemukatimarketomarketo infographicronga zvekare zvemukatikurega zvemukatinyorazve zvinyorwa